Kismaayo News » Jaahwareer ka jira natiijada doorashadii Somaliland
Jaahwareer ka jira natiijada doorashadii Somaliland
Kn: Xili loo fadhiyay in la shaaciyo doorashadii Isniintii ka dhacday Somaliland ayaa waxaa soo shaac baxaya hubanti la’aan ku aadan natiijada kama danbaysta ah iyo ifafaalo muujinaya in gacan bidixayni ay jirto.
Xisbiga mucaaradka ee Wadani oo saxaafadda la hadlay ayaa soo bandhigay kaarar cod bixin been abuur ah oo shaambadaysan kuwaasi oo uu leeyahay xisbiga talada haya ee Kulmiye, waxayna sheegeen in tuhunka ay qabeen iyo cabashadooda oo ay u gudbiyeen gudiga doorashooyinka ay dhagaha ka furaysteen taasina ay muujinayso jiritaanka wax istadaba marin ay iska kaashadeen xukuumadda iyo komiishinka doorashooyinka. Xisbiga Wadani ayaa sheegay inay gabi ahaanba joojiyeen wadashaqayntii ay la samaynayeen gudiga doorashooyinka tan iyo inta laga saxayo cabashooyinka ay gudbiyeen.
Soos iyo buuq laga yaabo inay rabshado isu badalaan hadaan la xakamaynin ayaa laga soo sheegayaa in durba uu ka bilawday magaalooyinka qaar. Ayadoo horayba ay u jirtay in xisbiga Wadani ay ka cabanayeen xarig, handadaad iyo goobaha qaar kood oo korjoogayaashooda loo diiday ayaa hadana waxaa budo cayriin ku sii daray oo tuhunka sii badiyay sanaadiiqdii doorashooyinka oo inta gudiga doorashooyinku meel ku xaraysteen aan hadana wax natiija ah shaacin mudo 4 maalmood ah. Sidoo kale korjoogeyaasha caalimiga ayaa shalay shir jaraa’id oo ay qabteen ay ku cadeeyeen in doorashadu ay lahayd daldaloolo badan.
Isku soo duubo, hadaan Alle sahlin oo labada xisbi midkood tanaasul la’imaan waxay sababi kartaa in xaaladda Somaliland ay gaarto bariga dhexe.